အမှား Remove msidcrl40.dll
ဖိုင်ကိုဆက်နွယ်သောအတူဂိမ်း၏မသငျ့လျြောတပ်ဆင်ခနှင့်အတူအဓိကအားဆက်စပ်ပြောင်းလဲနေသော msidcrl40.dll စာကြည့်တိုက်နှင့်အတူပြဿနာများ။ ဤအဂိမ်းများကိုထောက်ခံ windose အားလုံးဗားရှင်းအပေါ် GTA4နှင့်ထပ်မံကျ3run ဖို့ကြိုးစားနေသည့်အခါအများစုကမကြာခဏတစ်ဦးပျက်ကွက်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦး Registry ကိုသန့်ရှင်းရေးနှင့် msidcrl40 ထည့်သွင်းနှင့်အတူဂိမ်းတစ်ခုပြီးပြည့်စုံပြန်လည် install ပြုလုပ် - အမှား၏ဘေးကင်းလုံခြုံစွန့်ပစ်ခြင်းသေချာကြောင်း msidcrl40.dll အဓိကလမ်းနှင့်အတူပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေ။
အမှားများကို Remove d3drm.dll
D3drm.dll စာကြည့်တိုက် - DirectX ကိုအထုပ်၏အစိတ်အပိုင်းများထဲမှအချို့တိကျသောဂိမ်းကို run ဖို့လိုအပ်ပါသည်။ အသုံးအများဆုံးအမှားသင်သည် Direct3D သုံးပြီး 2003-2008 အတွင်းဂိမ်းရဲ့လွှတ်ပေးရေးကို run ရန်ကြိုးစားသောအခါက Windows 7, အပေါ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ပြဿနာတွေကိုဖြစ်နိုင်ဖြေရှင်းချက်ဒီစာကြည့်တိုက်အတွက်ပြဿနာများကိုဆုံးအများစုယုတ္တိနည်းလမ်း d3drm.dll တိုက်ရိုက် X ကိုအထုပ်၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုထည့်သွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်: လိုချင်သောဖိုင်သည်ဤအစိတ်အပိုင်း၏ဖြန့်ဝေနှင့်အတူဖြန့်ဝေသည်။
XINPUT1_3.dll ဖိုင် DirectX ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစာကြည့်တိုက်ထိုကဲ့သို့သောကီးဘုတ်, မောက်စ်, Joystick နှင့်အခြားသူများအဖြစ် devices များအနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်များ၏ input ကိုများအတွက်တာဝန်ရှိကြောင်း, ထို့အပြင်ကွန်ပျူတာဂိမ်းထဲမှာအသံနှင့်ပုံရိပ်ကိုအချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်သည်။ မကြာခဏသင်ကစားပွဲကို run ရန်ကြိုးစားသောအခါသတင်းစကားကြောင့် XINPUT1_3 ပုံပေါ်ကြောင်းတွေ့ကြုံတတ်၏။
တစ်ခါတစ်ရံအခါအမျိုးမျိုးသောဂိမ်းသို့မဟုတ်ဆော့ဖ်ဝဲကမ္ပည်းနှင့်အတူသေတ္တာနိုင်ပါတယ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် - "မှားယွင်းနေသည်, d3dx9_43.dll ပျောက်ဆုံး" ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့စနစ်ကစာကြည့်တိုက်ရှိသည်ပါဘူး, သို့မဟုတ်ပါကပျက်စီးကြောင်းကိုဆိုလိုသည်။ အများစုကတော့ဒီဂိမ်းနဲ့အတူဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပျက်ဥပမာ, Tank ၏ကမ္ဘာ့ဖလားအဲဒီ DLL လိုအပ်နိုင်ပါသည်, သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးစာကြည့်တိုက်ကို 3D ဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောအစီအစဉ်များအားဖြင့်လည်းသုံးနိုင်တယ်။
Windows ကိုအတွက် DLL file ကို Register
အမျိုးမျိုးသောအစီအစဉ်များသို့မဟုတ်ဂိမ်းကိုသွင်းယူပြီးနောက်သင်အမှားသောအခါအဘယ်မှာအခြေအနေမျိုးကြုံတွေ့ရပေမည် "ဟုအဆိုပါလိုအပ် DLL ကိုစနစ်ထဲမှာမဖြစ်သကဲ့သို့ Run ကို, မဖြစ်နိုင်တာပါစေ။ " Windows operating စနစ်များကိုများသောအားဖြင့်သင်တို့ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီးနောက်နောက်ခံအတွက်စာကြည့်တိုက်မှတ်ပုံတင်ရန်နှင့်သင့်လျော်သောနေရာအရပ်၌သင်တို့၏ DLL file ကိုထားဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းအမှားနေဆဲဖြစ်ပေါ်ခြင်း, စနစ်ကြောင့်ပဲ "ကိုကြည့်ပါ။ " မပါဘူး
ဖိုင်ကို tier0.dll နှင့်အတူ troubleshooting
Counter-Strike အတွက်မကြာခဏကစားသမား: ကမ္တာ့ထိုးစစ် tier0.dll အမည်ရှိပြောင်းလဲနေသောစာကြည့်တိုက် featured ထားတဲ့မှားယွင်းမှုတစ်ခုအဖြစ်ထိုပြဿနာနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ဒါဟာအားလုံးဗားရှင်းသတ်မှတ်ထားသောဂိမ်းကထောက်ခံ windose အပေါ်ထင်ရှားနေသည်။ တခါမှာဘယ်လိုအမှားဖယ်ရှားပစ်ရန်ပြောပါ tier0.dll - ဤပြဿနာကိုမှအာမခံထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်မတည်ရှိပါဘူး: အချို့အကူအညီနဲ့ပရိုဂရမ်းမင်းနည်းစနစ်များနှင့်တစ်စုံတစ်ဦးကပင်သင့်ကွန်ပျူတာ၏ Hardware ကို configuration ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်မကူညီဘူး။
Amtlib.dll အမည်ရှိစာကြည့်တိုက် - သင် Photoshop ကို run ရန်ကြိုးစားသောအခါထို program ကို Adobe Photoshop ကို၏အစိတ်အပိုင်းများတဦးတည်း, ဤဖိုင်တွင်ပေါ်လာသောအရာအတွက် bug ကို, ပုံပေါ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ဖြစ်ပျက်မှုများအတွက်အကြောင်းပြချက် - စာကြည့်တိုက်အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, ဒါမှမဟုတ် anti-virus software ကိုပျက်ကွက်။7windose ကနေ Windows ရဲ့လတ်တလောဗားရှင်းများအတွက်ပြဿနာအများဆုံးဝိသေသပေါ်ထွန်းခြင်း။
သငျသညျဥပမာ Crysis3၏ Sims 4, ဖီဖာ 13, သို့မဟုတ်, run ဖို့ကြိုးစားလျှင်, သင်တစ်ဦးကိုကိုးကား rld.dll ဖိုင်နှင့်အတူအမှား၏သင့်အားအကြောင်းကြားတဲ့စနစ်မက်ဆေ့ခ်ျကိုရတော်မူသည်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူး, ဒါမှမဟုတ်ဗိုင်းရပ်စ်အားဖြင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးဆိုလိုသည်။ ဒါဟာအမှားအတော်လေးဘုံတစ်ခုဖြစ်ပြီးယင်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းနည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။
သငျသညျလူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်း GTA ထဲကတစ်ခု run ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ: စန်း Andreas, အသုံးပြုသူစနစ်အမှားတွေ့နိုင်ပါသည်။ အများစုကတော့ကြောင့်ဤသို့ဆို၏ "ဟုအဆိုပါကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်ကိုပြန်လည်ကြိုးစားပါ vorbis.dll ပါဘူးကြောင့်အစီအစဉ်၏ပစ်လွှတ်, မဖြစ်နိုင်ပါ။ " ။ ဒါဟာ PC ကို vorbis စာကြည့်တိုက်မဟုတ်ကြောင်းအကြောင်းပြချက်ကတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
အတော်လေးမကြာခဏ "file ကိုမတွေ့ရှိ dxgi.dll" ကဲ့သို့မှားယွင်းမှုတစ်ခုရှိသေး၏။ အဓိပ္ပာယ်နှင့်ဤအမှား၏အကြောင်းတရားများသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် install လုပ် operating system ကိုဗားရှင်းပေါ်မူတည်သည်။ သငျသညျကို Windows XP တွင်တွေ့မြင်ဤသတင်းစကားလျှင် - ပိုဖွယ်ရှိသငျသညျ DirectX ကို 11 လိုအပ်သည်ဂိမ်းကို run ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့နေသော OS ကိုကမထောက်ပံ့နေသည်။
စန်း Andreas: နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. နှင့်အတူ dynamic စာကြည့်တိုက်ဂိမ်း Grand Theft Auto များအတွက် MTA vog.dll ပြုပြင်မွမ်းမံဖိုင်များကိုရည်ညွှန်းသည်။ မကြာခဏ set စာကြည့်တိုက်ပုံပေါ်သောအမှားများကိုဤ mod ဆောင်နှင့်အတူဂိမ်းကို run ဖို့ကြိုးစား။ SA: ပျက်ကွက် GTA ကထောက်ပံ့ထားတဲ့ Windows ကိုအားလုံးဗားရှင်းပေါ်တွင်ထင်ရှားနေသည်။
Zlib1.dll ၏မရှိခြင်းနှင့်အတူပြဿနာတစ်ခု fix
ဤအစိတ်အပိုင်းကုမ္ပဏီ၏ "Linux ကို Format ကို" ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်ပြီး, devices များရဲ့မှတ်ဉာဏ်တစ်လျှပ်တစ်ပြက်ဆံ့ကြောင်းမော်ကွန်းတိုက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်သတင်းအချက်အလက်ချုံ့ပုံစံထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခဏအဟောင်း video game consoles စ Sega, Sony နဲ့ကို Nintendo ၏ emulator များတွင်အသုံးပြု zlib1.dll ။ ဒီဖန်သားပြင်ပေါ်မှာသက်ဆိုင်ရာ error message ကိုမတွေ့ရှိသောအခါ။
ကွန်ပျူတာ» core.dll မ "program ကို run လို့မရပါနဲ့တူတစ်ဦးကမက်ဆေ့ခ်ျကိုဂိမ်းအမျိုးမျိုးကို run ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းဖြင့်ရရှိသောနိုင်ပါသည်။ ဂိမ်းကစားအရင်းအမြစ် (မျိုးရိုးက 2, Counter-Strike 1.6, အ Unreal အင်ဂျင်မိသားစုအပေါ်ဂိမ်း) သို့မဟုတ် DirectX ကို component တစ်ခု install လုပ်ပြီးသားကို standalone ဖြန့်ဖြူးနဲ့တူ - သတ်မှတ်ထားသောဖိုင်မူရင်းအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းရှိနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ lame_enc.dll စာကြည့်တိုက်ကိုပြုပြင်တာတွေ
ထို့အပြင်ခြေဆွံ့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာအဖြစ်လူသိများ Lame_enc.dll, MP3, format နဲ့အသံဖိုင်တွေရဲ့ encoding ကဖျော်ဖြေဖို့အသုံးပြုသည်။ အထူးသဖြင့်, ဒီ feature Audacity ဂီတအယ်ဒီတာဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သငျသညျက MP3 ရန်သင့်စီမံကိန်းကိုကယ်တင်ရန်ကြိုးစားသောအခါ, သငျသညျ lame_enc.dll အကြောင်းကို error message ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ဖိုင်မှုစနစ်တပ်ဆင်ရန်စနစ်ကကျရှုံးခြင်း, ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု, ဒါမှမဟုတ်မရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Mfc100u.dll ပြဿနာများအတွက် bug ကိုမှဒီဖြေရှင်းချက်
Run ဖို့ကြိုးစားခဲ့ဥပမာ, Adobe က Photoshop ကို CS6 သို့မဟုတ် Microsoft Visual C ++ 2012 ကို အသုံးပြု. အများအပြားအစီအစဉ်များနှင့်ဂိမ်းများ၏တဦးတည်း, သင်ဖိုင်ကို mfc100u.dll ဖော်ပြသောမှားယွင်းမှုတစ်ခုကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။ အများစုမှာမကြာခဏထိုကဲ့သို့သောကျရှုံးခြင်းကို Windows အသုံးပြုသူများကိုအောက်တွင် 7. စောင့်ကြည့်နိုင်, ကြှနျုပျတို့သညျဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဘယ်လိုရှင်းပြပါ။
D3D11.dll သူဂိမ်းကစား applications များအတွက်သုံးဖက်မြင်ပုံရိပ် output ကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သည်, Window 7, 8 များအတွက် API ကို DirectX ကို၏ဖွဲ့စည်းမှုအတွက် 10. ပါဝင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံသင်သင့်လျော်သောဆော့ဖ်ဝဲကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားသောအခါ, စနစ်မှားယွင်းမှုတစ်ခုမရှိခြင်း D3D11.dll ဖော်ပြပေးသောဖြစ်လာတယ်။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့စနစ်ကကျရှုံးခြင်း၏ installation သို့မဟုတ်ပြုပြင်မွမ်းမံနေစဉ်အတွင်း, Antivirus ကို installer ကိုကမဖယ်ရှားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ [jlbnm ghjbc နိုင်ပါတယ်။
Nxcooking.dll စာကြည့်တိုက် troubleshoot
Dynamic nxcooking.dll စာကြည့်တိုက်အစိတ်အပိုင်းဂိမ်းတစ်ခုဗဟုအတွက်ရူပဗေဒအင်ဂျင်လေ့လာမှုတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုသော PhysX နည်းပညာ, ကိုယ်စားပြုတယ်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားအောက်ရှိဖိုင်နှင့်အတူပြဿနာများမလျော်ကန်သောယာဉ်မောင်း၏ installation သို့မဟုတ်ဂိမ်းသူ့ဟာသူအဖြစ်စာကြည့်တိုက်မှထိခိုက်ပျက်စီးမှုကြောင့်ပထမဦးဆုံးဌာန၌ပေါ်လာပါသည်။
3DMGAME.dll Microsoft Visual C ++ တို့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်တစ်ဦးပြောင်းလဲနေသောစာကြည့်တိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဒီနေ့ရဲ့ဂိမ်းများနှင့်အစီအစဉ်များကိုအများအပြားအသုံးပြု: PES 2016, GTA 5, Far Cry 4, Sims 4, Arma 3, Battlefield 4, Watch Dogs ကို, Dragon Age: Inquisition နဲ့တခြားသူတွေ။ ထိုအပလီကေးရှင်းများအားလုံးစတင်မရနိုငျနှင့်သင့်ကွန်ပျူတာဖိုင် 3dmgame မပါဘူးဆိုရင်စနစ်မှားယွင်းမှုတစ်ခုကတင်ပြထားပါတယ်။
Window.dll ဖိုင်ကဂိမ်းစီးရီးဟယ်ရီပေါ်တာနှင့် Rayman နှင့်အတူအဓိကအားဆက်စပ်လျက်, ဂိမ်းစာတိုက်2နှင့် addons ဖြစ်ပါတယ်။ သူမ၏ကြောင့်ဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ်တစ်ခုမမှန်ကန်ကြောင်းတပ်ဆင်၏လုပ်ရပ်များမှပျောက်နေသည်သို့မဟုတ်ပျက်စီးအကြောင်းပြောနေတာစာကြည့်တိုက်အတွက်မှားယွင်းနေသည်။ အဆိုပါအမှားပြတင်းပေါက်နှင့်အတူပြဿနာများ 98. ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဖြေရှင်းချက်ကနေ Windows ကိုအားလုံးဗားရှင်းပေါ်တွင်ပေါ်လာသည်။
ဖိုင် api-ms-Win-CRT-runtime က-l1-1-0.dll နှင့်အတူအမှားအယွင်းများ၏ဆုံးမပဲ့ပြင်
B ကအချို့ကိစ္စရပ်များ, program ကို run ဖို့ကြိုးပမ်းမှုသို့မဟုတ်ဂိမ်းဖိုင်ကို api-ms-Win-CRT-runtime က-l1-1-0.dll အတွက် error message ကိုအတူအဆုံးသတ်ထားသည်။ ဤသည်ပြောင်းလဲနေသောစာကြည့်တိုက်အထုပ်ကို Microsoft Visual C ++ 2015 နှင့်ယနေ့ applications များအများစုဘို့လိုအပ်ကြောင်းကပိုင်ဆိုင်သည်။ 8 - ထိုအမှားအများဆုံးမကြာခဏ Windows Vista ကပေါ်တွင်တွေ့မြင်ဖြစ်ပါတယ်။